नेकपाभित्र भूसको आगो – ओलीबिरुद्ध कसिलो मोर्चा « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १४:३८
काठमाडौं । मुलुकमा कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार बनेपछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र समर्थित कार्यकर्ता मात्र नभै विपक्षमा भोट होल्ने मतदातासमेत उत्साही बनेका थिए । हुनपनि लामो अस्थिरता र खिचातानीपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाउनु सकारात्मक थियो ।
नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने सबैले केपी ओली सरकारप्रति आशा र भरोसाका आँखा लगाएका हुन् । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो यो सरकार बेकम्मा भइसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकार बनेको करिब डेढ वर्षको समय व्यतित भइसक्यो । अब भने यो सरकारको काम कारवाहीप्रति रुखो टिप्पणी गर्न सबै तम्तयार छन् । नेपालको इतिहासमै यति धेरै जनमत कि त ०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पाएका थिए , कि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् ।
तर अहिले चाहिं ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटले मात्र सत्ताको स्वाद लिने अरुले प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहनुपर्ने अवस्था विष्फोट हुनै लागेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल , माधवकुमार नेपाल मात्र होइन भीम रावल , नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि वामदेव गौतमसम्मको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा नेताहरु उपयुक्त दाउ पर्खिरहेका छन् ।
बीपीले सुरु गरेको सुधार कार्यक्रमबाट राजा महेन्द्र डराएर सैनिक कू को बाटो रोजे । जसले गर्दा बीपीले चाहेर पनि जनहितका पक्षमा काम गर्न पाएनन् । तर ओलीलाई भने कसैले कुनै रोकछेक गरेको देखिंदैन । न राजा महाराजा नै छन् , अंकुश लगाउने न असहिष्णु प्रतिपक्षी नै रहेको छ । तैपनि ओलीको खाल सरेको छैन । यसको कारण के होला ? स्वयं नेकपाका कार्यकर्ताको प्रश्न तेर्सिन थालेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेकपाभित्र अहिले भुसको आगो सल्किएको छ । भित्रभित्रै सखाप भैसकेपनि सतहमा भने आइसकेकोे छैन । एमाले र माओवादीको गठबन्धन आफैंमा चमत्कारिक र रहष्यमय थियो । चुनावको मुखमा यी दुई विपरित धारबीचको नाटकीय एकता कसले र के उदेश्य प्राप्तिका लागि गरेको थियो , त्यो विस्तारै खुल्दै जाला । तर अहिले चाहिं ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटले मात्र सत्ताको स्वाद लिने अरुले प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहनुपर्ने अवस्था विष्फोट हुनै लागेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल , माधवकुमार नेपाल मात्र होइन भीम रावल , नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि वामदेव गौतमसम्मको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा नेताहरु उपयुक्त दाउ पर्खिरहेका छन् ।
पार्टी एकता भएको वर्ष दिन वितिसक्दासमेत पोलिटव्यूरो बन्न सकेको छैन । तल्लो तहसम्म एकता हुने कुरा त महाभारत भइरहेको छ । गाउँ तहको अवस्था हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीको धङ्धङी कायमै छ । एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरानै छ । तन मिलेको भनिए पनि मन मिलेको आभाष छैन । जवर्जस्ती जोड्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो खाले एकताले पार्टी जीवनमा कस्तो रक्तसञ्चार गराउला ? नेकपा नेतृत्व नै अन्योलमा छ । त्यसैले पार्टी र सरकार आफूखुसी हिंड्ने अभियानमा देखिन्छ । असन्तुष्ट नेताहरुले बाहिर सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने गरेका कतिपय धारणा खतरनाक लाग्छ ।
विस्तारै पार्टी कब्जा गर्ने अभियानमा तल्लिन भएको ओली गुट अहिले प्रचण्डको साथ लिने दाउमा देखिन्छ । तर प्रचण्ड आफैं यस्तै तिकडम गरेर आजको अवस्थामा आएकाले ओलीलाई सजिलै काँध थाप्ने अवस्थामा पनि छैनन् । यसबाट त्रसित संस्थापन इतर समूह भने ओली र प्रचण्ड विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा बलियो ढंगले अघि बढिरहेको छ । त्यो अभियानमा ओलीका पुराना सारथी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत सामेल भएको देखिन्छ ।
उनको पछिल्लो गतिविधि र अभिव्यक्तिले अनिष्टको संकेत गरिरहेको छ । मोर्चाबन्दी कसिलो बन्यो भने प्रचण्डको साथ पनि ओलीले गुमाउने अवस्था आउने छ । यसका लागि अबको केही समय ज्यादै महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसलाई संकेतका रुपमा माधवकुमार नेपालले हिजो बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले सो कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमै ओलीमाथि चर्काे प्रहार गरे । उनले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै जनताबीच पार्टीको साख निचो पार्न लागिपरेको आरोप समेत लगाए । प्रम ओली हरेक मञ्चमा बोल्दा जनभावना अनुरुप काम गरिरहेको भन्ने तर जनताको पक्षमा माखो नमार्ने प्रवृत्ति रहेको खुलेर बताए । काम भन्दा बढी गफ गर्नाले जनताको विश्वास विस्तारै गुमेको उनको ठम्याई थियो ।
सार्वजनिक मञ्चहरुमा असन्तुष्ट नेताहरुले व्यक्त गर्ने धारणाले नेकपा भित्र ठूलै भुइँचालो जाने संभावनाको संकेत गरेको छ । ओलीले पार्टीभित्र राम्रो व्यवस्थापन गर्ने सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कुनैपनि बेला भुसको आगो सतहमा देखिन सक्छ । जनभावना विपरित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून बनाउन लागेको कुरा समेत पार्टीभित्र चर्चा हुन थालिसकेको छ । ओलीले एकपक्षीय रुपमा प्रेस बिरोधी कानून ल्याउन खोजेको भन्दै योगेश भट्टराई लगायतका युवा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब ओली सरकार विस्तारै पतनको दिशाउन्मुख रहेको स्पष्ट भएको छ ।
यस्तै , नेकपाले गएको आम चुनावमा दुई तिहाईको जनमत नपाएको केवल ५५ प्रतिशतमात्र मत पाएकाले धेरै नमात्तिन सचेत गराए । अर्काे बुँदा उनले पार्टी विधि र पद्धतिमा नचलेको गुनासो गरेका छन् । ओली र प्रचण्डको निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरेका छन् । साथै उनले पार्टी नेता कार्यकर्ता अध्ययन नै नगरी जथाभावी बोल्ने भएकाले ठूलो समस्या आएको आरोप लगाए । यो आरोप स्वयं ओलीप्रति लक्षित थियो ।
सार्वजनिक मञ्चहरुमा असन्तुष्ट नेताहरुले व्यक्त गर्ने धारणाले नेकपा भित्र ठूलै भुइँचालो जाने संभावनाको संकेत गरेको छ । ओलीले पार्टीभित्र राम्रो व्यवस्थापन गर्ने सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कुनैपनि बेला भुसको आगो सतहमा देखिन सक्छ ।
जनभावना विपरित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून बनाउन लागेको कुरा समेत पार्टीभित्र चर्चा हुन थालिसकेको छ । ओलीले एकपक्षीय रुपमा प्रेस बिरोधी कानून ल्याउन खोजेको भन्दै योगेश भट्टराई लगायतका युवा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब ओली सरकार विस्तारै पतनको दिशाउन्मुख रहेको स्पष्ट भएको छ ।